မာလီ: ယခုနှစ်အစအဦးကတည်းကအသတ်ခံ 150 ကလေးများနှင့်အန္တရာယ်နီးပါး 400 000 - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကုမ္ပဏီ "မာလီ: ယခုနှစ်အစအဦးကတည်းကအသတ်ခံ 150 ကလေးများနှင့်အန္တရာယ်နီးပါး 400 000 - JeuneAfrique.com
ပိုများသော 150 ကလေးများအချို့မိုင်းလုပ်သားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ပထမနှစ်ဝက်ကာလအတွင်းမာလီအတွက်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် 2019 နှင့် 377 000 သေဆုံးခဲ့သည်, အင်္ဂါနေ့သြဂုတ်လ 13 ယူနီဆက်ကပြောသည်။
"မာလီအတွက်အမျိုးသားတို့တဘက်၌သင်ျခြိုငျးချိုးဖောက်မှုများအရေအတွက် 2019 အတွက်တိုးမြှင့်ထားပါတယ်" ဟုကြေညာချက်ယူနီဆက် (UNICEF မှ) တွင်သတိပေးခဲ့သည်။ "150 နှင့် 2019 ၏ပထမတစ်ဝက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ရာရသူစဉ်အတွင်းနောက်ထပ် 75 ကလေးများသေဆုံးခဲ့သည်," ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကဆိုပါတယ်။
ထို့အပြင်လက်နက်ကိုင်အုပ်စုများအတွက်သားသမီးများ၏စုဆောင်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှု "2018 အတွက်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှစ်ဆနှင့်သိရပါတယ် 900 ကျော်ကျောင်းများကြောင့်မလုံခြုံမှုမှပိတ်လိုက်ရှိနေဆဲ "ဒီကြေညာချက်ကဆိုသည်။
Da Sobane ဦးသေဆုံး 22 ကလေးများ
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဖြန့်ချိထားတဲ့စုံစမ်းအစီရင်ခံစာမှာတော့မာလီရှိကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင် (Minusma) 22 ကလေးများတဆယ်နှစ်လုံးကို (တကျိပ်တပါးသောမိန်းကလေးများနှင့်တကျိပ်တပါးသောယောက်ျားလေး) အားတဦးတည်းအသက်ကြောင်းညွှန်ပြ 35 ဦးသေဆုံးသူတွေထဲမှာခဲ့ကြသည် Da Sobane ၏ Dogon ရွာဆန့်ကျင်ဇွန်လ9အပေါ်တိုက်ခိုက်နေစဉ်အတွင်း, အရာအများစုဟာသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ကိုမီးရှို့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နေအိမ်များအတွင်း၌ကျဉ်းကျပ်ခဲ့ပါသည်။
"ဟုအဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုများကိုမာလီမှာရှိတဲ့ပြန့်နှံ့အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့, သားသမီးလက်နက်ကိုင်အုပ်စုများကဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်စုဆောင်းအသတ်ခံရတဲ့၏တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာဖြစ်တယ်" ဟုယူနီဆက်, Henrietta Fore ၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာထဲမှာကိုးကားဆိုပါတယ် ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများကိုကာကွယ်ပေးရန်4သန်း
အဆိုပါစင်တာတိုက်ခိုက်မှုများ၏ပြန့်ပွားလည်းယူနီဆက်အဆိုအရ "သားသမီးများ၏ maiming, သူတို့ရဲ့ရွှေ့ပြောင်းခံရခြင်းနှင့်ခွဲခြာ၎င်းတို့၏မိသားစုများအနေနှင့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာသူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှု" တွင်ရလဒ်။
"ဒါဟာ 377 000 ကလေးများထက် ပို. လက်ရှိကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏လိုအပ်ချက်အတွက်မာလီမှအကူအညီများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ခန့်မှန်းပါတယ်" ဟုကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။ ယူနီဆက်အဆိုအရလေးသန်းဒေါ်လာ (ယူရို 3,6 သန်း) 2019 မာလီ facing အကြမ်းဖက်မှုမှအမြိုးသမီးမြားရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်သားသမီးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
ခြောက်နှစ် 2012 မှာသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုမြောက်ပိုင်းမာလီအောက်မှာခဲ့ကြောင်းဂျီဟတ်ဝါဒီအုပ်စုများဆန့်ကျင်ပြင်သစ်စစ်တပ်ကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများစတင်ပြီးနောက်တိုက်ခိုက်မှုအုပ်စုများအယ်လ်ကိုင်းဒါးနှင့်ဆက်စပ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအစ္စလာမ်မစ်ပြည်နယ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖက်မှုများ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခရောနှောထားတဲ့, အထူးသဖြင့် စင်တာပြည်၌။
DJ အာရာဖတ်မရဏ: Abidjan ဖို့လမ်းကြောင်း en Daïshikan၏အဖွား
ခြေလျင် OM - OM: Fenerbahce, 5,5ME Marseille မှ Luiz ဂူစတာဗိုအနီးကပ်! - ခြေလျင် 01
ဘယ်လို Meghan မင်းသမီးဒိုင်ယာနာအကြောင်းပြောနေတာ - သို့ရာတွင်သူ၏သင်္ချိုင်းတွင်းအပေါ် Archi အောင်စောင့်ဆိုင်း